Tor Runhare, nhare ine Android asi ine chisimbiso chemhando yeiyo Tor Project | Linux Vakapindwa muropa
Tor Runhare, nhare ine Android asi ine chisimbiso chemhando yeiyo Tor Project
Kunyangwe paine chokwadi chekuti musika wekufambisa unogarwa neApple neIOS, dzimwe nzira dziri kuramba dzichizivikanwa uye izvo zvinoita kuti mamwe mapurojekiti atange uye afambire mberi. Iyi ndiyo mamiriro e Tor runhare, nhare ichave iine chiratidzo cheTor Network asi chakavakirwa paApple.
Izvi zvinonakidza nekuti ichi chinongedzo chichava chinoshanda sema Mobiles eApple asi chakachengeteka pane izvi sezvo chiine zvimwe zvinorambidzwa zvinodzivirira yedu yega data.
Tor Runhare rwakavakirwa paCopperhed OS rom, rom inotora yakanakisa yeApple asi inoshandura humwe hwakavanzika uye maparamendi ekuchengetedza emunhu. Ndicha shandisa zvakare Orwall, chishandiso chinoita kuti mafoni ese ekupedzisira aende kuburikidza neTor network, ichiita mafoni pamwe nemamwe marudzi ekutaurirana zvakanyanya kuoma kuteedzera kana kushandisa.
Tor Runhare runoshandisa software kubva kuTor Network kuitira kuti vashandisi vave nenhare yakachengeteka yeApple
Nehurombo iyo Tor Runhare Haisi chishandiso chatinogona kutenga mune chero chitoro senge Samsung kana iyo Nexus. Asi chishandiso icho chiri muchiri kusimukira uye parizvino pane chete rom imwe inogona kuiswa paGoogle Pixel uye Google Nexus.
Chero zvazvingaitika, Tor Runhare rwunoita kunge ruchazoitika muchinguva chipfupi kunyangwe ini ndisingafungi kuti iri nharembozha yeApple inogona kutengwa muzvitoro asi ichava rom kana inoshanda sisitimu inogona kuiswa pane chero imwe nhare yeApple uye izvo zvinongochinja izvo zvinodiwa kuti mushandisi ave nharembozha yakachengeteka kana zvirinani kuti data ravo rive rakachengeteka pasina kurasikirwa nemikana yekuve neiyo smartphone mumaoko avo. Chimwe chinhu icho mamwe masisitimu anoshanda ayo akavakirwa paGnu / Linux senge Plasma Mobile kana Ubuntu Runhare, pakati pevamwe, ari kutevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Tor Runhare, nhare ine Android asi ine chisimbiso chemhando yeiyo Tor Project
ok tinovimba zvinoitika kumberi
Pindura kune zvimweprogramasg
Ubuntu 17.04 ichaburitswa muna Kubvumbi 26
Iwe unogona ikozvino kutumira sms ine Skype yeLinux